14 | July | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Angelina Jolie for World Refugee Day 2012
Hoping for the ASEAN UNION, rather than disintegrating into smaller states
I hope and pray that this would never happen to our beloved Myanmar.
But I am worried that the present Myanmar Government led by U Thein Sein, Myanmar Tatmadaw, Daw Suu led NLD and most of the Myanmar people need to learn more about the concepts of Democracy, Human Rights, Equal Rights, Federalism, Minority Rights, Responsibilities of Majority, Rights of Minority Ethnic Groups, Rights of Minority Religious Groups, Concepts of Preventing Genocide, Hate Speeches, Racial Profiling, Derogatory Name calling etc.
Tags:Asean, Burma, European Union, Minority rights, Myanmar, Racial profiling, Southern Thailand, Thein Sein
ပြန်ကြားချက်-ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၂)
ပြန်ကြားချက်-ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၂) by FB of Ye Yint Thitsar
ညီငယ် ကိုမြတ်သိန်းထွန်း ရဲ့ “ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၂)” မှာ ကျွန်တော့် ရဲ့ယခင် note ပါ အရေးအသားအချို့ကို ညီငယ်နားလည်မှု လွဲမှားပြီး ပြန်ဆွေးနွေးထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ မရ်မာ (Marma) လူမျိုးတွေ ဟာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်လက်ခံထားပြီးသားပါ။ ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတို့ထက်စောပြီး စစ်တကောင်းမှာ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ လည်း ကျွန်တော် မပြောခဲ့ပါ။ ညီငယ် မှားဖတ်မိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မရ်မာလူမျိုး တွေ ဘယ်အချိန်က စပြီး ဘင်္ဂလားမှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုရေးသား ခဲ့ရာမှာ ကျွန်တော်ဟာ ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်း နဲ့ ဘင်္ဂလားစွယ်စုံကျမ်းတို့မှာပါတဲ့ အတိုင်း တစ်ဆင့်
Tags:Asia, Bangladesh, Bengal, Burma, Chittagong, Chittagong Hill Tracts, India, Rakhine State
ပြန်ကြားချက်-ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၁)
ပြန်ကြားချက်-ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း အပိုင်း (၁) by the FB of by Ye Yint Thitsar
လေးစားအပ်ပါသော ကိုမြတ်သိန်းထွန်း၊ မိတ်ဆွေများနဲ့တကွ လေ့လာသူ လူကြီးလူကောင်း
အပေါင်းတို့အား “မင်္ဂလာပါ” လို့ ဦးစွာပထမ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
Tags:Asia, Burma, Media of Burma, Muslim, Myanmar, Rakhine State, Rohingya people, United Nations High Commissioner for Refugees